रुकुममा बस्ने मन्जित नेपालीले हेलिकप्टर बनाएका छन् । जुन कुरा नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि हो । सबैले हृदय देखिनै मन्जितलाई धन्यवाद दिनुहोला।
विश्वमा कति छ सुपरकम्प्युटर ? सुपरकम्प्युटरको प्रयोग के के मा ?
सुपरकम्प्युटर आधुनिक विश्वको विकासको लागि निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले अहिले विश्वका धेरै मुलुक यसको विस्तारका लागि अघि बढिरहेका छन् । विज्ञान तथा प्रविधिको हिसाबमा यसलाई निकै महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । विश्वस्तरीय सुपरकम्प्युटर्सको प्रयोग गाडी डिजाइनदेखि लिएर मौसमको अनुमान तथा नयाँ औषधिको खोजको लागि पनि गरिँदै...